Lentil: Olee uru ndị ọ bara? Olee otú na-eri? Lee ebe a!
Mkpụrụ ugu: Chọpụta uru ma mụta iji ya mezie ya!
Alimentos	 17 January 2019
Na ngwụcha afọ, oriri lentil bụ ama ama nke Afọ Ọhụrụ, mana eji ya eme ọfụma n'oge ekeresimesi. Na mgbakwunye na ịdị mma, dị ụtọ, na-edozi ahụ, lentil nwere akụkụ ihe omimi ha, nke na-eme ka ha jiri ya mee ihe n'oge a n'afọ.
N'isiokwu ndị a, ị ga-amụta maka ụdị lentil dị mkpa, otu esi eji ya, mara okpokoro nri na ozi ndị ọzọ dị mkpa gbasara nri a. Lelee!
Lentil bụ ọka, ọka, nwere akụrụngwa yitere agwa, n'agbanyeghị na edobere ya n'ụzọ dịtụ iche.
Dị ka agwa, e nwere ọtụtụ ụdị lentil ndị agba agba. Kacha nkịtị bụ aja aja, na-emekarị na New Year na Christmas nri abalị, ma ọ bụghị naanị ya.
Na mgbakwunye na agba aja aja, enwere uhie, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nwa, odo na oroma. E nwere ọtụtụ ụdị na obere ihe dị iche n'etiti ha, ma e wezụga obere nkọwa na ekpomeekpo.
Uru nke agba na ụdị dị iche iche bụ na ị nwere ike ime nri anyasị gị ma ọ bụ efere gị. Jiri ihe karịrị otu ụdị lentil ma ọ bụ iche dị iche site na agba a họọrọ.
Hụkwa mkpa ọ dị iwere basil!
A na-achọta lentil n'akụkụ ọka nke nnukwu ụlọ ahịa, nso agwa na osikapa ma na-erikarị 3 ka 5 reais kilo. Bịaru oge ezumike nso, ọ na-adị oke ọnụ.
Na ọtụtụ ụlọ ahịa na-ahụkarị, ị nwere ike ịchọta aja aja, nke kachasị. Typesdị ndị ọzọ na-adịkarị na nnukwu ụlọ ahịa ndị ọkachamara, yana ọka na ngwaahịa ndị ọzọ dị iche.
Ndị a nwere agba, ndị ọzọ dị iche iche nwekwara uru dị elu karịa aja aja nke dị ọnụ ala n'okpuru onu oriri nkịtị na ọnọdụ owuwe ihe ubi.
Olee otú na-eri?
Enweghị ụkọ nke usoro lentil. A na-ejikọkarị ya na osikapa, nke na-enye ya ekpomeekpo siri ike, yana ọdịdị mara mma, ebe ọ bụ na lentil siri ike karịa osikapa, ọbụlagodi mgbe esiri ya.
Ntụziaka ndị ọzọ a na-ahụkarị bụ ịgbakwunye lentil nwere agba na salads. Ọ dị mma isi nri ya na nke mbụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa al dente, ọ dị ezigbo ụtọ, ma ọ bụrụ na a kara aka ya n'ụzọ ziri ezi ma na-enye nri dị ụtọ.
E nwekwara ofe lentil nke enwere ike iji anụ ma ọ bụ naanị na ngwa nri. Nhọrọ dị oke mma, ọkachasị maka ụbọchị oyi.
Tebụl na-edozi ahụ
Lentil bara ezigbo ọgaranya na protein. N'ime ihe a na-akpọ amino acid dị mkpa, nke bụ nke ahụ anaghị emepụta, n'ime 20 dị, ọ nwere 18. Na mgbakwunye, ọ dịkwa ọgaranya na eriri na abụba dị oke abụba, dị mkpa maka ahụike, ọkụ na edozi nri.
O nwere otutu vitamin B6 na folic acid, nke di uku maka ahu ike nwanyi. O nwekwara otutu ihe oriri, mana otutu n'ime ya bu eriri, ezigbo carbohydrates, nke na-ekpochapu ma ghara ichikota aru.
O nwere protein?
Lentil nwere ihe niile amino acid dị mkpa nke ahụ mmadụ chọrọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bara ọgaranya na protein, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% nke lentil niile bụ protein, ihe karịrị ụfọdụ anụ.
Ee, ihe dịka 20% nke lentil bụ carbohydrates, dị ka ọka ndị ọzọ. Ihe dị iche bụ na carbohydrate sitere na eriri nri, nke na-enyere aka n'iwepu abụba, shuga, usoro nke eriri afọ na, n'ihi ya, ọnwụ ọnwụ.
N'ezie, a ghaghị iji nlezianya rie ya, na-enweghị ikwubiga okwu ókè. Ọ bụrụ na ị na-eri nnukwu lentil kwa ụbọchị, kama ịtalata ma mee ya nke ọma, ọ ga-eme ka ị maa abụba. Ya mere, ọ dị mma mgbe niile ịpị igodo nke nri ziri ezi, nke siri ike, ntakịrị ihe ọ bụla iji zere ikwubiga okwu ókè na nsogbu ndị ha na-eweta.
Ọ bụ ezigbo nri ga - eme ka nri gị gbasie ike ma wetara gị ọganiihu na mmemme gị. Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla gbasara lentil na ojiji ha, hapụ okwu n'okpuru!
Omega 3: Chọpụta ihe ọ bụ maka na uru ya bara!
Nri bara ọgaranya na calcium
N'oge okpomọkụ: Ntuziaka Nri!
Osteopathy: Chọpụta ihe, nhọrọ na ndị ọzọ ebe a!